#Dowladda Burundi oo ku hanjabtay in gabi ahaanba ciidamadeeda kala baxeyso Soomaaliya - Get Latest News From Horn of Africa
#Dowladda Burundi oo ku hanjabtay in gabi ahaanba ciidamadeeda kala baxeyso Soomaaliya
By On Feb 22, 2019 Last updated Mar 30, 2019
Dowladda Burundi ayaa ku hanjabtay in ay gabi ahaanba kala bixin doonto ciidamada ka jooga dalka Soomaaliya, doonto hadii Midowga Afrika uu ku adkeysto Go’aanka ah kunka Askari ee la qorsheeyay in laga saaro Soomaaliya.
Go’aanka ay dowladdu qaatay sidoo kale waxaa taageeray Baarlamaanka dalkaasi Burundi oo sheegay in ay ciidamadooda kala baxayaan Soomaaliya.
Wasiirka gaashaandhigga Burundi,Emmanuel Ntahomvukiye, ayaa baarlamaanka u sheegay in dowladda ay horraan ku waregelisay Midowga Afrika go’aanka go’aankan, Burundi waxaa ka jooga dalka Soomaaliya ciidammo gaarayo 5000,
Midowga Afrika ayaa dhawaan Go’aan ku gaaray in Kun ka mid ah Ciidamada Burundi ee ka howlgalla deegaanada Hir-Shabeelle dib loogu celiyo dalkooda, hayeeshee waxa ay u muuqataa in dowladda Burundi aysan ku qanacsaneyn Go’aanka Midowga Afrika.
Afhayeen u hadlay dowladdaBurundi ayaa yiri’ Burundi xilligaan diyaar uma ahan inay ciidamo kala baxdo Soomaaliya, balse hadii Midowga Afrika ku adkeystaan go’aankooda bixitaanka kunka askari anaguna dhamaan ciidamadeena waan la baxeynaa’
Sidoo kale Xukuumadda Burundi ayaa caddaalad daro ku tilmaantay in qorshaha haatan lagu doonayo in kunka ciidan ee ugu horreeya ee Soomaaliya laga saarayo ay dhammaan ka soo jeedaan Burundi, waxay sheegtay inay lumin doonto in ka badan hal milyan oo doollar bil gudaheed.
Dowlada Burundi ayaa u muuqata mid ka careysan go’aanka midowga Africa uu qaatay ee ah in 1,000 askari oo ka mid ah ciidamadooda Burundi laga saaro Soomaaliya.
Heshiiska Qaramada Midoobay ayaa dhigaya in ciidammada nabad ilaalinta ee tiradoodu ay ka badan tahay labaatan kun ay tahay inay isaga baxaan dalka isla markaana ay ammaanka ku wareejiyaan ciidamadda Soomaaliya,balse weli la aaminsan yahay in Soomaaliya aysan laheyn Ciidamo amaanka la wareega.
Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhawaan booqasho ku tegay magaalada Bujunbura isaga oo kulamo ku saabsan arintan la yeeshay dhiggiisa Burundi.